Cameroon - Far North: Wax ka badan dagaalyahaniintii hore ee Boko Haram waxay ka walwalaan dib udhexgalka - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY »Cameroon - Waqooyiga Faransiiska: In ka badan 400 Boko Haram waxay ka walwalaan dib-u-dhexgalka
Cameroon - Waqooyiga Fariga: In ka badan 400 Boko Haram waxay ka walwalaan dib-u-dhexgalka
Tan iyo markii ay salka Force ee jinsiyadaha Mixed (FMM) halkaas oo ay ku nool yihiin, waxay ku toobadkeeneen ee Boko Haram doonaya fulinta barnaamijka dhaqan-celinta ay.
Maalmahani ma fududa in qaar ka mid ah dagaaladii hore ee 400 ee kooxda argagixisada ah ee Boko Haram, oo doortay inay hubka dhigaan. Saldhigga Ciidanka Wadajirka ah ee Fududeeyaha (FMM) - Ciidamada qotomiyey by Cameroon, Nigeria iyo Chad inay la diriraan argagixisada - Mora ku yaal Mayo-Sava, waxay walwalo ay u dhexgalka bulshada.
Maalin kasta Isbedelo, on wargeysyada this 10 April 2019, dhulka siinayaa qaar ka mid ah iyaga ka mid ah. Kiiska Moudou Oumarou oo maalmaha noloshiisa ku fadhiisanaya garab geed. "Waxaan ka qayb qaatay boobkii Boko Haram: waxaan gubay guryo waxaanan dilnay dadka. Hase yeeshee, waqtiga dheeriga ah, ayaa wax badan ka ogaaday in kooxdu aysan i siinayn wixii ay igu ballanqaaday. Marka gobolka Cameroon naga soo gaadhay, waxaan arkay muuqaal ku habboon in aan ku soo noqdo waddada nabadda oo aan ka tagno dariiqa "ayaa sheegay in dambe.
Sida maalmuhu u socdaan, ninka ayaa is weydiiya su'aalo ku saabsan dib u habeyntiisa. "Waxaan haystaa carruur badan. Mustaqbalka dhow, looma siin doono wax lacag ah. Waa inaan sugnaa dhammaystirka ballanqaadyada dawladda. Wax kastana si tartiib ah ayuu u socdaa. Aad ayaan uga xunahay. Qaar badan oo naga mid ah ayaa laga yaabaa inay xatooyo ka sameeyaan magaalada si ay u noolaadaan. "ayuu yidhi.
Ahmadou ayaa yiri: "Mas'uuliyiintu nagama sheegaan haddii ay na barayaan shaqooyin ama xitaa ku biiraan ciidanka. Waxay inooga sheegaan oo keliya xeryaha ay ku dhisi doonaan inay nagu dhisaan. Maxaa xiiseynaya waa waxa aan sameyn doonno si aan u helno nolol bulsho caadi ah ».
Kuwa ka soo horjeeda dagaalka, xusuusnow Mutations, waxaa ka mid ah haweenka iyo caruurta sanadaha 15. Tan iyo booqashada Diisambar 2018 ee Fai Yengo FrancisIsku-duwaha Qaranka ee Guddiga Qaran ee Hub ka dhigista, Dib-u-habeynta iyo Dib-u-soo-celinta hore ee Combatants (CNDDR), waxay arkeen wax ballan ah oo run ah.
Haddii ay waydiiyaan su'aalo ku saabsan mustaqbalkooda, joogitaanka dagaalyahanadii hore ee argagixisada ee Mora ma xaqiijinayaan dadka. Xaqiiqdii, qaar ka mida xagjiriintii hore waxay si toos ah ugu soo noqdeen qoysaskooda. Kiisaska xadgudubka iyo dhacdada waxaa loo aaneynayaa iyaga.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://actucameroun.com/2019/04/10/cameroun-extreme-nord-plus-de-400-ex-combattants-de-boko-haram-sinquietent-au-sujet-de-leur-reinsertion/
Boko Haram oo ka soo horjeeda dagaalka ayaa is waydiinaya dib u dhexgalka
Gabadh ka mid ah 11 sano ayaa lagu xareeyey Pastor Bamenda